Izindlela NgeziHloko zikaMoya
Izindlela Ngezihloko Zomoya
Ngezansi, sihlele izihloko ezingokomoya ezithinta izingqikithi ezivamile, kulokho esikubiza ngokuthi "izindlela". Uma ufuna amazwana esihlokweni esithile, hlola phambili ekhasini lekhaya lezihloko ezingu-izimo lapho ungasesha khona iqoqo lethu lonke lezincazelo zendaba.
Lifundisani iBhayibheli elihlobene nemishado nemindeni? Yiziphi izimfundiso ezintsha zobuKristu ezisebenzayo?
Ingabe iBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu ngempela? Sekuyizinkulungwane zeminyaka igcinwa, yafundwa, futhi yaziswa. Yini esiyaziyo ngayo? Sikwenza kanjani lokho?
UThomas Jefferson ubhale ngelungelo elingenakuphikwa lokufuna injabulo. UJordan Peterson, isazi sokusebenza kwengqondo esisanda kuduma saseCanada, ubhala ngokubaluleka kokuthatha umthwalo wemfanelo - nokuthi ukwenza okuthile okuhle nokufaneleyo yilokho okufanele sikulwele. U-Emanuel Swedenborg ubhale ngokuba wusizo - nokuthi lowo mzamo uholela kanjani enqubekela phambili ngokomoya.
Ukwenza Umuzwa Wezinto
Abantu banikezwe amakhono amabili abalulekile - izingqondo ezinengqondo, nenkululeko engokomoya. Uma sithuthukisa ukuqonda kwethu, singayisebenzisa kahle inkululeko yethu. Ngakho-ke ... kubalulekile ukuthi siqonde amaqiniso angokomoya, njengalawo axhumene lapha.
Okufanele Ukwenze Empilweni Yakho?
Ngamunye wethu, kunendlela ebheke ngakulungile, futhi ivulekile ukuthi siyilandele. Uma siyilandela, sizovumela iNkosi ukuthi ikhule ibe ntsha, ibe yinhle, ithande ezinhliziyweni zethu, futhi - ekugcineni - uthando lwethu oluholayo luyoba uthando lweNkosi, nomakhelwane, futhi sizokwamukela insindiso.
Umcabango Omusha WamaKristu
Ukuqonda umcabango omusha wobuKristu, obanzi, obanzi, indlela eyodwa ewusizo ukubona amaqiniso ayo eqoqelwe ezimfundisweni eziyisihlanu eziyinhloko: INKOSI, uLizwi, ukuzalwa kabusha, izulu, nothando lokuhlangana noma umshado ofanele. Thola ukuthi konke lokhu kusebenza kanjani, futhi uhlole ezinye izimfundiso "zamathuluzi", futhi.
Impilo Yangemva Kokufa
Zonke izinto iZulu nesihogo naphakathi